इरफानकी श्रीमतीको भावुक पत्र ‘उनीप्रति मेरो एकमात्र गुनासो छ, उनले मलाई जीवनभर बिगारेर गए’
May 2, 2020 4720
भर्खर पति वियोगमा परेकी बलिउड अभिनेता इरफान खानकी श्रीमतीले एउटा भा’वुक स्टाटस लेखेकी छन् । विश्वले झेलिरहेको अप्ठेरो अवस्थामा आफुमाथि परेको थप अप्ठेरोका बारेमा लेख्न चाहन्छु भन्दै भावु’क स्टाटस सार्वजनिक गरेकी छन् ।
उनका पति तथा भारतका एक होनहार कलाकार इरफानको ५३ वर्षको उमेरमा निध’न भएको छ । मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा भर्ना भएका इरफानको उपचारकै क्रममा निध’न भएको हो ।
लण्डनबाट भारत फर्किएपछि उनी मुम्बईको ललिताबेन अस्पतालमा फलोअप चेक’अप गराउँदै आएका थिए । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा ग म्भी र स म स्या देखिएपछि मंगलबार मात्रै उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । केहि दिन अगाडि मात्रै उनकी आमाको समेत निध’न भएको थियो ।
इरफानको निधन:पछि उनकी श्रीमती सुतपा सिक्दारले भावुक पत्र लेखेकी हुन् । उनले लेखेको पत्र इरफानको ट्वीटर एकाउन्टमा राखिएको छ ।
अंग्रेजीमा लेखिएको पत्रको नेपाली भावानुवाद खबरहबले गरेको छ । जुन यस्तो छः
जब विश्वभर यसलाई व्यक्तिगत नो क्सानीको रूपमा देखिरहेका छन् त म पारिवारिक वक्तव्य कसरी लेख्न सक्छु ? जब लाखौं मानिसहरू’ले हामीसँगै शो क मनाइरहेका बेला म कसरी एक्लो महसुस गर्न सक्छु ? सबैलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो नो क्सान होइन, प्राप्ति हो।
हामीलाई उनले सिकाएका चिजहरूको प्राप्ति। अब हामी यो प्राप्ति’लाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न शुरू गर्नेछौँ। अब म मानिसहरूलाई थाहा नभएका केही कुरा लेख्दै छु।
यो हाम्रा लागि अविश्वसनीय हो तर, इरफान’कै शब्दमा भन्दा यो ‘जादू’ हो। चाहे उनी हुन् वा नहुन्। उनले माया गरे, त्यो एकतर्फको मात्र थिएन। उनीप्रति मेरो केवल एकमात्र गुनासो छ, उनले मलाई जीवनभर बिगारेर गए।
पूर्णताका लागि उनले गर्ने प्रयासले हरेक कुरामा सामान्य तरिकामा चित्त बुझाउन मलाई दिने छैन। उनले देख्ने हरेक कुरा चाहे त्यो क र्क स र भद्रगोलको परिस्थिति नै किन नहोस्, ‘लय’ हुन्थ्यो । मैले त्यस प्रकारको लयको संगीतमा नाच्न र गाउन सिकेको छु।
अन्ततः हाम्रो जिन्दगी नाटकमा मास्टर क्लास थियो। त्यसैले जब नबोलाएको पाहुनाको नाटकीय इन्ट्री भयो, त्यही बेला मैले कोलाहलमा एक सामाजस्य बनाउन सि’के। डाक्टरको रिपोर्ट तिनै स्क्रिप्ट जस्तै थिए, जसलाई पूर्ण बनाउन चाहन्थ्ये। त्यसैले मैले कहिले’काहीँ उनलाई परफर्मेन्समा कमजोरीको एक खोट पनि पाइन्।
यो यात्रामा हामीले धेरै या’दगार मानिसहरूसँग मिल्यौं उनीहरूको सूची निकै लामो छ। तर, केही मानिसहरू’लाई सम्झन चाहन्छु, हाम्रो आन्कोलोजिष्ट डा. नितेश रोहतगी (मेक्स अस्पताल, साकेत), जसले हाम्रो हात शुरुआतदेखि नै समाएर राखेका थिए।
डा. डेन क्रेल (यूके), डा। शिद्रवी (यूके), मेरो धड्कन तथा अँध्यारोमा उज्यालो दिने डा सेवन्ती लिमये (कोकिलाबेन अस्पताल)। यो यात्रा कति रमाइलो, सुन्दर र पी डा दायी थियो भनेर शब्द’मा लेख्न सजिलो छैन।
पछिल्लो अढाइ वर्षको अन्तराल पाए’जस्तो भएको छ जसको आफ्नै शुरुआत, मध्य र उत्कृर्ष थियो जसमा इरफान निर्देशकजस्ता थिए। यो हाम्रो ३५ वर्ष लामो सहयात्राभन्दा अलग थियो। हामी विवाह’भन्दा फरक थियौँ, एक भएजस्तो थियो।
म मेरो सानो परिवारलाई दुई छोराहरू बाबिल र आयानले डुंगामा राखेर अगाडि बढाइरहेको देख्दै छु । जहाँ इरफान’ले निर्देशन दिँदैछन्, त्यहाँ होइन, यहाँबाट मोड। जीवन सिनेमा होइन र ‘रिटेक’हरू लिन सकिँदैन भन्ने बुझेपछि म छोराहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छुः दिमा’गमा बुबाको मार्ग’निर्देशनलाई राखेर सुरक्षित तरिकाले डुंगा चलाउ।
आयानः आफ्नो मनलाई निय न्त्र ण गर्न सिक। र, दिमागलाई आफैं निय न्त्र णमा आउन देऊ।
आँ सुहरू बगिरहँदा, इरफानलाई मनपर्ने फूल ‘रात की रानी’ उनको विजय यात्रापछि विश्राम दिन राखेको स्थानमा रोप्ने छौँ। यसले समय लेला तर यो फुल्ने छ र सुवासहरू फैल’ने छन्। वर्षौँसम्म त्यसले मानिसका मनहरूलाई छुनेछ, जसलाई म फ्यान भन्दिन बरु आउने’वाला परिवार भन्छु। – खबर हब
Prev१० दिनमै ११ जनाको मृ’त्यु भयो महोत्तरीमा, गाउँले सबै त्रसित’
Nextग्रह, राशि अनुसार तपाईंको भोलिको दिन कस्तो रहला! हेर्नुहोस् भोलि आईतबारको राशिफल